I-loft Yesimanje ne-Rustic e-Herylvania Dwtn. - I-Airbnb
I-loft Yesimanje ne-Rustic e-Herylvania Dwtn.
Heredia, Heredia Province, i-Costa Rica
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Pablo
Siyakwamukela e-Costa Rica! Siyabonga ngokubuka i-Eclectic Loft yethu enkulu enakho konke okudingekayo. Izinto zesimanje egumbini lokugezela nasekhishini elinokuthintwa kwasemaphandleni okuthokomele. Itholakala kalula enkabeni yendawo yomphakathi yase-Herylvania edolobheni, ngebanga lokuhanjwa ngezinyawo ukuya ezindaweni zokudlela, amathilomu, izimakethe ezinkulu, ama-pub kanye nezokuthutha zomphakathi eziya e-San Jose, e-Alajwagen kanye neSikhumulo Sezindiza. Umnyango oseduze nje ne-na futhi eduze kakhulu ne-Luatina, i-Intercultura ne-Central Park ye-Herylvania.
Le Loft ese- isendaweni engaphansi kwendlu enikeza umuzwa wangasese kakhulu. Phakathi kwendawo yasekhishini nombhede uzothola itafula lesidlo sasekuseni elifanele ukusebenza. Endaweni eyinhloko kukhona lolu udonga lwezitini zangempela kanye nemiqhele yokhuni yangempela kusilingi konke kusuka esakhiweni esihle kakhulu sesakhiwo esibonisa izimpande nokugqwala kwaso. Futhi uzoba nomshini wakho wokuwasha/wokomisa ukuze uwusebenzise ngasese. Endaweni yokungena uzoba nekhabethe elithokomele kakhulu lokugcina imithwalo yakho kanye nekhoneni elincane kakhulu lokufunda.
Sisenhliziyweni yendawo yomphakathi eshukumayo yase-Herylvania, ngakho-ke indawo ezungeze amadolobha amakhulu igcwaliswa ngezindawo zokudlela, amathilomu namaphabhu cishe ku-300M azungeze indlu. Kuphela nje emgwaqweni uzothola isitolo esikhulu esinezindawo zokuthola amakhemisi.
Sihlezi sitholakala ukuze sikuthinte ngemiyalezo nganoma yiluphi usizo noma ukusikisela okudingwa yizivakashi zethu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Heredia namaphethelo